बिहेपछि झनै सुन्दर देखिन नायिका आँचल, भन्छिन्– धेरै फ्यानहरुले बिहेपछि अनुहारमा झनै चमक कसरी आयो? हेर्नुहोस केहि तस्विरहरु « Nipolnews
बिहेपछि झनै सुन्दर देखिन नायिका आँचल, भन्छिन्– धेरै फ्यानहरुले बिहेपछि अनुहारमा झनै चमक कसरी आयो? हेर्नुहोस केहि तस्विरहरु
नेपाली नायिका आँचल शर्मा लकडाउनको समयमा जीम जाने, मन परेका परिकार खाने र परिवारसँगै समय बिताएको बताउने आँचल अहिले भने म्यूजिक भिडियोको छायांकनमा व्यस्त छिन् ।आँचललाई उनका शुभचिन्तक तथा आफन्तले बिहेपछि झनै सुन्दर देखिएको भनेर प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् ।
आँचल भन्छिन्–‘मलाई त धेरै फ्यानहरुले बिहेपछि अनुहारमा झनै चमक कसरी आयो भनेर प्रश्न सोध्नुहुन्छ । म आफूलाई भने उस्तै छु जस्तो लाग्छ ।’आँचल मन खुशी भयो भने अनुहारमा चमकता आउने कुरामा विश्वास गर्छिन् । उनले भनिन्–‘सायद, बिहेपछि मेरो मन झनै खुशी भएको छ । उदिपजीको साथले मनमा उमंग ल्याएको छ ।
सायद, यही भएर नै मेरो अनुहारमा फ्यानहरुले चमकता देख्नुभएको हुनसक्छ ।’नायिका शर्माले बिहेपछि आफू विन्दास पनि भएको बताइन् । भनिन्–‘पहिले पहिले भिडियो बनाउँदा पनि पहिरनमा म खुबै ख्याल गर्थेँ । अहिले, मन लागेको पहिरन लगाएर टिकटक बनाउँछु । कसैले केही भन्छ कि भन्ने डर नै छैन ।’उनी सामाजिक संजालमा निकै संक्रिय रहेकि छिन् । त्यस्तै, उनी लकडाउनपछि २ वटा म्यूजिक भिडियोमा काम गरेकी आँचलले गीत छनोट गरेर मात्र भिडियोमा काम गर्ने बताएको खबरअनलाइनखबरमा समाचार छ ।